प्रतिनिधिसभा विघटन भारतको इशारामा गरेको हो ? : प्रचण्ड - समय-समाचार
प्रतिनिधिसभा विघटन भारतको इशारामा गरेको हो ? : प्रचण्ड
२९ पुष २०७७, बुधबार १७:०५
काठमाडौं, पुस २९ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता टुट्नुमा ओली नै दोषी रहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
दाहाल–नेपालपक्षीय काठमाडौँ जिल्ला कमिटीद्वारा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित भेलालाई सम्वोधन गर्दै दाहालले पार्टी एकता गर्दा हतार नगरेको दाबी गर्नुभयो ।
नेकपाको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान अनुसरण गर्दै अघि बढेको र आफूहरु नै पार्टीको मूल धार, विधि र संस्थागत भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद भारतीय गुप्तचरका प्रमुखसँगको भेटबाटै प्रस्ट भएको बताउनुभयो । दाहाल–नेपाल समूहको वृहत कार्यकर्ता भेला अहिले जारी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बुधबार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानामा बृहत् कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको उक्त समूहले बुधबार बागमती प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको हो ।